Spotify waxay siinaysaa wareejin naqshadeynta "maktabadaada" boodhadhka | Abuurista khadka tooska ah
ka Podcasts waxaa bartilmaameedsanaya kooxda naqshadeynta ka socota barnaamijka 'Spotify app'. Aynu nidhaahno mid ka mid ah yoolalkaagu waa inaad ku adkeyso Apple dib-u-qaabeyntaas oo markaa aad xoqdo qaar ka mid ah dadka isticmaala ee ka doorbida barnaamijka kuwa ku yaal dhismaha.
Waa qaybta «Dukaankaaga buugaagta» oo dib loo habeeyay in loo kala qaybiyo muusikada iyo faylalka dhammaan kuwa haysta rukunka ugu sarreeya. Fikraddu sidoo kale waa in la habeeyo waayo-aragnimada dhageysiga si aad ugu haysato podcodka aad ugu jeceshahay gacanta.
Iskuxirka hagaha ayaa la hagaajiyay si aad awoodid si fudud u abuurta liiskaas ama liisaska shaqada ama markii aad guriga deggan tahay adigoo deggan.
Wax walba waxaa u sabab ah maktabaddaas "la khalkhaliyay" inay ahaato fududahay in la helo podcasts taas ayaa ina danaysa. Taasi waa, waxaa la siiyay meel ballaadhan si ay uga dhigaan inay ka soo baxaan waxa u noqon lahaa canaasiirta kale ee aadka ula xiriira heesaha iyo kuwa kale.
Podcasts hadda waa loo qaybiyay Dhacdooyin, Soo Degsasho iyo Bandhigyo. Dhinaca kale, tabka muusigga waxaa loo kala saaray liiska, fanaaniinta iyo albumyada. Liisaska ayaa sidoo kale la cusbooneysiiyay si khibrada si weyn loo hagaajiyay iyo masaafada ku jiri karta heerka naqshadeynta u dhexeeya alaabada Spotify iyo Apple.
Sidee xiiso leh tan naqshadeynta interface ee maktabadda qofka ayaa imid waxyar uun kadib markii aan ogaaday in Apple ay udub dhexaad u tahay barnaamijkeeda adeegga waxa uu ahaa Apple Music iyo Apple Podcasts. Dhaqdhaqaaqan ay soo saartay shirkadda Spotify ayaa sifiican loo fahmay; waxa aan jeclaan lahayn inaan ogaanno labadoodaba cidda hore u qaadatay hawsha, maadaama waqtigu ku dhowaad isku mid u ahaa labada shirkadood.
Haa, haddii aad rabto iskuday maktabada cusub, waxaad ubaahantahay lacag bixin qaali ah. Sikastaba, taariikhahan waxay had iyo jeer bixiyaan dalabyo ah € 0,99 muddo seddex bilood ah koontooyin cusub ama .9,99 XNUMX muddo seddex bilood ah. Naqshad kale in kastoo aad u "jaalle".
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Kani waa naqshadaynta barnaamijka 'Spotify' si loo xoojiyo Podcasts